GUULEED OO U JAWAABAY TARSAN !!! - Caasimada Online
Home Warar GUULEED OO U JAWAABAY TARSAN !!!
GUULEED OO U JAWAABAY TARSAN !!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya Mudane C/kariin Xuseen Guuleed ayaa iska fogeeyay eedeyn dhowaan uga timid guddoomiyihii hore gobalka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho mudane Tarzan.
Waxa uu sheegay in baabuur uusan dhicin isla markaana baabuurtaasi oo ahaa nuuca aan xabadda karin xukuumaddu ay amartay in amniga lagu sugo oo hay’adaha ammaanka dalka lagu wareejiyo.
“Tarzan waa uu i nabayaa aniga ma qaadan baabuur uu lahaa gobalka ee toddobo baabuur waxa ay ahaayeen kuwa amniga lagu xaqiijinayay” sidaas waxaa sheegay Wasiir Guuleed.
Dhowaan ayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarzan uu shaaciyay in wasiir Cabdikariin Xuseen Guuleed uu la wareegay sanadkii la soo dhaafay gawaari loogu tala-galay in maamulka gobalka Banaadir uu ugu adeego shacabka.
Wuxuu caddeeyay baaburtaas in ay hadda gacanta ku hayaan hey’addaha ammaanka, maadama ay yihiin kuwa aan xabada karin ay uga cabsadeen in ammaanka lagu khalkhal galiyo ayuu yiri.
“Amarka baabuurtaas looga wareejiyay maamulka gobalka Banaadir waxaa soo saaray golaha wasiirrada ee horrey annagana waan fulinay uun” ayuu yiri.